မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ ban ည့်ခံပွဲအတွက်တရုတ်လက်ကားဖြူအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင် spandex ကော့တေးအဖုံး | Jianye
မင်္ဂလာဆောင်သို့မဟုတ်ပွဲများအတွက်လက်ကားအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူ spandex ကော့တေးအဖုံး
Damask အထည်အလိပ်, spandex / Lycra
တစ်ခါသုံး, ရေစိုခံ, ရေစိုခံ
စားသောက်ခန်း၊ အိမ်၊ ဟိုတယ်၊ အပြင်ဘက်၊ ပါတီ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ
အဖြူ၊ အနက်ရောင်၊ အပြာနှင့်အနီ
တစ်လလျှင် 50000 ယူနစ် / ယူနစ်
တစ်ဘူးတွင်အိတ်တစ်လုံးနှင့်အပြင်ဘက်ပုံးထဲရှိအိတ် ၅၀ စီ
ပစ္စည်း အရည်အသွေး spandex ထည်၊ ၁၀% lycra + ၉၀% polyester၊ ထည်သည်နည်းလမ်း ၄ လမ်းဖြစ်သည်
အထည်အလိပ် GSM 200g / m2 အကြောင်း
အရောင် အဖြူ၊ အနက်ရောင်နှင့်အနီရောင် (အရောင်ဇယားသို့မဟုတ်အရောင်ဆိုးဆေးတွင်ရရှိနိုင်သည့်မည်သည့်အရောင်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည်)
စားပွဲတင်အရွယ်အစား 80 * 110cm
OEM လက်ခံသည် ဟုတ်တယ်
အသုံးပြုမှု စားသောက်ပွဲ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၊ အိမ် (သို့) စားသောက်ဆိုင်
အားသာချက် အလွယ်တကူ ၀ င်ချ၊ သုံးနိုင်သည်၊ တာရှည်ခံ၊ ချစ်စရာကောင်းသောအရောင်၊ အကောင်းဆုံးကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။
နမူနာအချိန်နမူနာ ၅ ရက်လောက်
ထုတ်လုပ်မှုအချိန် ၁၀ ရက်လောက်
ငွေပေးချေမှု ကုန်ပစ္စည်းများမပို့မီ 30% TT ကြိုတင်မဲနှင့် 70% TT, 100% TT မျက်မှောက်မှာ
Shaoxing Jiangye အပြင်ထွက်ပစ္စည်းများ co ။ , ltd သည်ပလတ်စတစ်ပရိဘောဂပစ္စည်းများအတွက်အမျိုးမျိုးသောပညာရှင်များထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တရုတ်ပြည်၊ Zhejiang ပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရှန်ဂူး Yonghe စက်မှုဇုန်တွင်တည်ရှိသည်။ ထိုနေရာသည် Ningbo Port နှင့် ၅၀ ကီလိုမီတာသာဝေးပြီးဆက်သွယ်ရေးကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်သောရှန်ဟိုင်းဆိပ်ကမ်းမှ ၂၀၀ ကီလိုမီတာသာဝေးသည်။ ကုမ္ပဏီသည်ပလပ်စတစ်မှုတ်စက်၏ကွန်ပျူတာ flan Controller ကဲ့သို့ပလတ်စတစ်ထိုးစက်မှ ၅၀၀ ဂမှ ၁၅၀၀၀ ဂအထိ၊ နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့စက်။ Hongye ၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာစားပွဲများ၊ ကုလားထိုင်များနှင့်အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်ဘက်ရှိခုံတန်းရှည်များဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များကကြိုဆိုကြသည်။
အရည်အသွေး၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဂုဏ်သတင်းသည်တည်ထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏အခြေခံဖြစ်သည်။ Hongye ရှိကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကိုအရည်အသွေးမြင့်ပြီးကြော့ရှင်းသောဒီဇိုင်းအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်သည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိနိုင်ငံများမှပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောထုတ်ကုန်များ၏ပုံများသို့မဟုတ်နမူနာများကိုကြိုဆိုပါသည်။ အတူတူစုဝေးကြစို့၊ အနာဂတ်ကိုလှပပြီးတောက်ပအောင်လုပ်။
PP, ABS ကဲ့သို့သောအခြားပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၁.၆ အားသာချက်ကုန်ကြမ်း HDPE သည်မည်သည်တို့နည်း
၎င်းသည်စားပွဲများကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည်၊ ပိုမိုပေါ့ပါးသည်၊ ပိုမိုကြာရှည်ခံသည်။ အလေးချိန်အနည်းငယ်သာရှိသည်၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။
မှုတ်မှိုနှင့်အမှုန့် -coated သံမဏိဘောင်
၃။ ကုန်ပစ္စည်းအာမခံဘယ်လောက်ကြာမလဲ၊ ငါဘယ်လိုတိုင်ကြားချက်တင်ရမလဲ။
4. MOQ အကြောင်း
1 * 40HQ ကွန်တိန်နာစားပွဲနှင့်ထိုင်ခုံအမျိုးမျိုးကိုသင်ရောနှောနိုင်ပါသည်။ သို့သော် 20GP ကွန်တိန်နာအတွက် ၁ * ၄၀ HQ သာရှိပါက ၀ ယ်သူသည်ဒေသဆိုင်ရာအပိုဒေါ်လာ ၂၅၀ ကိုပေးချေလိမ့်မည်။
5. ဘယ်လို OEM နှင့်ပုံနှိပ်လိုဂို?
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်သူကုန်အမှတ်တံဆိပ်ခွင့်ပြုချက်စာကိုရရှိလျှင်အော်ဒါအဆင်ပြေမည်ဆိုပါကအမှာပမာဏကြီးမားပါကတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသည်
ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု ၃၀% နှင့်သင်မှာယူနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်သင်္ဘောတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများပြီးဆုံးလျှင်ကွန်တိန်နာကိုတင်ပါမည်။ ကုန်ပစ္စည်းပို့သူမှကျွန်ုပ်တို့ထံငွေစာရင်းပို့။ B / L မိတ္တူကိုအီးမေးလ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လက်ကျန်ငွေကိုပေးချေပြီးကျွန်ုပ်တို့မှနဂို B / L CO နှင့်ထုပ်ပိုးစာရင်းပြေစာပို့မည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းများကိုသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုဒေသအကောက်ခွန်ဌာနမှရယူနိုင်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ it ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှု၊ စားသောက်ဆိုင်နှင့်လက်လီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းများအတွက်စိတ်ကြိုက်အတွင်းပိုင်းပရိဘောဂများနှင့်ပရိဘောဂများကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးပြုဟိုတယ်ပရိဘောဂပေးသူများဖြစ်ပြီးဟိုတယ်အိပ်ခန်းပရိဘောဂများအပါအ ၀ င်ဟိုတယ်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ပရိဘောဂများကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့် Custom Hotel ပရိဘောဂများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအထူးပြုသည်။
ဟိုတယ်ပရိဘောဂထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်စတိုင်လ်ကိုမဆိုအဓိကဟိုတယ်အမှတ်တံဆိပ်များ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရာမှခေတ်ပြိုင်အထိအကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ အစဉ်မပြတ်ဟိုတယ်ပရိဘောဂဒီဇိုင်းများကိုစီစဉ်ပေးသည်။ မည်သည့်ဟိုတယ်ပရိဘောဂအစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုသင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ကြိုက်ဟိုတယ်ပရိဘောဂများနှင့်အပန်းဖြေစခန်းများကိုဟိုတယ် Headboards၊ Nightstands ဟိုတယ်၊ Credenzas၊ ဟိုတယ် Micro Fridge Dressers၊ Mirrors, hotel Desks, hotel ကုလားထိုင်နှင့်ဟိုတယ် Activity Tables တို့ပါ ၀ င်သည်။
အရောင်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ (ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြူ, အနက်ရောင်, ပန်းရောင်, ကော်ဖီ, ရွှေ, etc)
လိုင်းဝန်ဆောင်မှုအပေါ် 24 နာရီ
ကုန်ပစ္စည်းများ 100% QC စစ်ဆေးခြင်းမတိုင်မီစစ်ဆေးခြင်း
OEM, ODM ဝန်ဆောင်မှုကြိုဆိုခဲ့ကြ
Knock-packing ကိုအပိုင်းပိုင်းတစ်ခုစီတွင် PE Foam ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ အပြင်တွင်နှစ်ဆအားကောင်းသော ၅ လွှာအလွှာရှိသောကာတွန်းသေတ္တာများ၊ ဖောက်သည်များတံဆိပ်နှင့်ဖော်ပြချက်များနှင့်အတူပုံးထုပ်များတပ်ဆင်ထားသည်။ ပျက်စီးလွယ်သောအရာများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန် Glass အစိတ်အပိုင်းများကိုသစ်သားဘောင်ဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် site စစ်တမ်းများ၊ CAD နည်းပညာရေးဆွဲချက်များနှင့်ကိုးကားတင်ပြချက်များပါ ၀ င်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုအထုပ်အပိုးတစ်ခုလုံးကမ်းလှမ်းသည်။ အရောင်းမြှင့်တင်ပြီးနောက်ပြီးပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောအရည်အသွေးအာမခံချက်ကိုအလေးထားသည်။
တစ် ဦး ကအပြည့်အဝပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှု။
Survey နှင့် installation ကိုလမ်းညွှန်။
တစ် ဦး ကအပြည့်အဝအတွေ့အကြုံရှိအလုပ်အဖွဲ့။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်သူများသာမကဒီဇိုင်း၊ အပ်နှံခြင်း၊ အကယ်၍ ဖောက်သည်သည်တပ်ဆင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါကတပ်ဆင်ခြင်းကိုကြီးကြပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပညာရှင်များကိုစေလွှတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားလုံးအတွက်အခမဲ့ဒီဇိုင်းကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကမေးခွန်းများရှိပါက ၁၂ နာရီအတွင်းပြန်လည်ဖြေကြားပေးမည်။
Hot Sale စားပွဲနှင့်ထိုင်ခုံများအကာအကွယ်ပေးမည့်ထိုင်ခုံအဖုံး
ပွဲများအတွက်ပူအရောင်း spandex စားပွဲပေါ်မှာအဖုံး
မင်္ဂလာဆောင်အတွက်အသုံးပြုသောလက္ကား spandex ကုလားထိုင်အဖုံးများ ...
မင်္ဂလာဆောင်သို့မဟုတ်ပွဲသုံးဘို့ spandex စားပွဲပေါ်မှာအဖုံး
လူကြိုက်များ spandex ထုံးစံပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန် turntable du ...